Umuzi elisentshonalanga, eyayaziwa ngokuthi eKönigsberg, has enomlando wasendulo. Lesi sivumelwano yasungulwa ngo 1255 kulezi ziqhingi kuwo womabili lomfula Pregel, lapho ekhulwini XIV ezakhiwa amabhuloho ukuthi ukuhlanganisa izingxenye ngazinye edolobheni ndawonye. Ngezikhathi ezithile zezakhiwo ezindala angaphansi umsebenzi wokuvuselela izakhiwo. Ehlobo lika-2016 waqala kulungiswe High Ibhuloho Kaliningrad. Lo msebenzi okumele luphele ngo-entwasahlobo 2017.
Umuzi amabhuloho eziyisikhombisa
Zonke imizila eKönigsberg ngaphandle aphoyintimenti ngqo wagcwalisa imisebenzi ukuzivikela. Esaba ukuhlasela okuvela Lithuania nasePoland, abakhileyo emzini phambi ngamunye amabhuloho sebakhe izinqaba ngesimo kwemibhoshongo nge eqinile yensimbi-igcwele kwesihlahla se-okhi amasango. Izinsika ibhuloho babe izakhiwo zazo ngokusebenzisa izintuba angase zokudubula isitha sisondela.
Kuze kube ngasekuqaleni kwekhulu XX emfuleni Pregel iye kabanzi sebenzisa navigation. Ngakho-ke, ukwakhiwa kwebhuloho ngamunye kuhlanganisiwe jika indlela, ukuthi ukuhlinzekela kungenzeka ukuba weqa izikebhe kanye nemikhumbi nge insika okusezingeni eliphezulu. Njengoba ukwakhiwa wesitimela, okuyinto ehlangene Kaliningrad Chernyakhovsk, Pregel ilahlekelwe simo sayo njengemholi i ezokuthutha Umthambo ezibalulekile. Ngakho-ke, isidingo ukukhulisa amabhuloho wanyamalala. Kuphela High Ibhuloho Kaliningrad kuze kube muva nje agcinwayo lo msebenzi. indlela yayo ngezikhathi esibethelwe izinjongo zokuvimbela futhi ukuthunyelwa imithambo kwezohwebo.
Umlando ukwakhiwa, emsebenzini wokulungisa nokwakha kabusha
Ibhuloho eNkulu Kaliningrad, noma kunalokho ku eKönigsberg, lakhiwa 1520. esiphambanweni sokhuni emfuleni exhunywe endaweni isiqhingi Forshtadt Lomse. eminyaka kuphela emithathu nengxenye, kwanqunywa ukuba kabusha ibhuloho. Ngo 1882, saqinisa ezisekelweni isitini, agugile izingxenye ukwakhiwa lokhuni esikhundleni sensimbi. Esikhathini esifanayo lapho iye yamisa esakhiweni esithile esincane, okuyinto kwaku iziyisikhombisa netindlela lapho lo dilution ngayo leli bhuloho.
Ngokuthakazelisayo, lokhu isakhiwo, eqinisweni, yilokho lo Superintendent idokodo ibhuloho, bendawo kwabanye isizathu christened Ilokhi noma inkundla Munchausen. Isizathu salokhu, ngokusobala, kwakungamadodana lamatshwayo indlu enhle, nakuba lakhiwa iminyaka 100 ngemva kwesikhathi lapho ehlala prototype wangempela Baron abadumile.
Ukubolekisa ngezindodla sokulungiswa okuphezulu Ibhuloho Kaliningrad usebhekene ngo-1939. Lesi sakhiwo ubudala adiliza ngokuphelele. Ukuhlehlela emuva a amamitha ambalwa nezinsika ngimdala isitini, wakha ipulazi elisha ukhonkolo, okuyinto kusungulwa flooring metal ngamandla.
Isidingo sokuba umsebenzi wokuvuselela izakhiwo yesimanje
Entwasahlobo ka-2016, iziphathimandla zedolobha wanquma ukuba afeze zokulungisa impambano ezokuthutha ezimpambanweni zomgwaqo Bagration, Dzerzhinsky nango-October, okungukuthi, endaweni lapho kwebhuloho kuphezulu. Ngo Kaliningrad, njengoba sazi, izobanjelwa a ukufana ambalwa esigabeni sokugcina-FIFA 2018 World. City waqala ukulungiselela kusengaphambili lesi senzakalo, recreating zemidlalo hhayi kuphela, kodwa futhi ukubonakala emigwaqweni.
Ngaphansi kohlelo, wanquma kabusha ibhuloho okusezingeni eliphezulu e Kaliningrad. Le phrojekthi ngezimali isabelomali lesifunda, ngentuthuko yomsebenzi wokwakha ukulawula siqu lwekhanda lalowo emzini Aleksandrom Yaroshukom. Ngokusho uchwepheshe ulinganisela ukwehla izindawo safinyelela mayelana 80%. Ngakho-ke, isakhiwo esidala ukuqaqa ngokuphelele, futhi endaweni yawo ibhuloho elisha ohlangabezana nezidingo yesimanje izokwakhiwa.
Iyokwanda kanjani entsha High Ibhuloho
Kaliningrad, isithombe amasayithi ingase ivele kwi imali yamaphepha entsha iyigugu nomlando wayo. Kodwa, ngokusho kwe-iziphathimandla neminyango yezakhiwo komuzi, ibhuloho okusezingeni eliphezulu kuya nakumasiko akuyona eyakhe.
Naphezu kwakho konke lokhu, wonke umsebenzi ukuliqaqa izikhungo kwenziwe ngokukhulu ukucophelela, ukuze ukubhubhisa main izingxenye isakhiwo. Ezinye izingxenyana indlela adjustable idluliselwe Museum, namatshe izindlu lasendulo, atholakala ngaphansi asphalt kwaleli bhuloho izosetshenziselwa Landscaping nobe emigwacweni yase dolobheni.
Ibhuloho ububanzi ngemva umsebenzi wokuvuselela izakhiwo anyuswe 3 metres. Lapha, i-traffic emine imoto uzobe ihlelwe. Kanye izindlela ezimbili engaphakathi ingxenye yomgwaqo ebekelwe izimoto okuhleliwe gasket tramways. Zombili izinhlangothi kwaleli bhuloho ifakwe eziseceleni abezinyawo izindlela for Abahamba.
Thwebula wema okufushane umnyuziki ukuthi ihambisane ukwakhiwa
Ehlobo lango-2016, lapho imisebenzi ku ukuqaqa lesi nezipani High Bridge, abatshuzi, simatasa ukuliqaqa amasayithi ukwakhiwa Subsea, kwadingeka abhekane nobunzima esingalindelekile. inhlanzi Big, enesisindo esingaba amakhilogremu angaphezu kwangu-200, ngezinye izikhathi uvele endaweni yokwakha, ngokuletha ukwesaba kubantu.
Kwavela ukuthi kwaba eyikati ehlala emgodini oseduze. Ngokwe yiphini lenhloko abaphathi idolobha Kaliningrad Artur Krupin, ababhukudi abangena uzamile ukuba nizifeze zonke izenzo ezidingekayo ne ngokuqapha konke okusemandleni ukuze hhayi abaphazamisa ohlala umfula hhayi ukumethusa emakhaya.
Engagement - lokhu kuyisinyathelo sokuqala esibalulekile esiya a izibopho eziqinile emikhayeni